Izimpawu ze-AAC Clyde Space UK zisebenza ngamasathelayithi ayi-10 akhiwe ngeGlasgow xSPANCION - Micro-Semiconductor.com
Izimpawu ze-AAC Clyde Space UK zisebenza ngamasathelayithi ayi-10 akhiwe ngeGlasgow xSPANCION
Iziphuphutheki ezincane zizokwakhiwa njengengxenye yephrojekthi entsha yeminyaka emithathu enesihloko esithi xSPANCION. Inhloso ukudala i-satellite constellation amabhizinisi angayisebenzisa ezinhlelweni ezinjengokuxhumana okusekwe kusathelayithi, i-Earth Observation kanye ne-remote sensing.
I-UK Space Agency nge-ESA, izobambisana ngokuxhasa lo msebenzi nge- € 9.9 million. Izingxenye eziningi zayo zizozuza emsebenzini wokuthuthukisa oxhaswe yiScottish Enterprise.
"I-xSPANCION izoguqula indawo yethu yokuhlinzeka ngezikhala," kusho uLuis Gomes, isikhulu esiphezulu se-AAC Clyde Space. "Kuzosivumela ukuthi sinciphise kakhulu izindleko zayo yonke imilayezo eqoqiwe, zonke izithombe ezithathiwe, sisekele lawo macala amabhizinisi kuze kube manje angakwazanga ukuthethelela izindleko zemali yokuba namakhulu ezinzwa ezindleleni."
“Ngokuyisisekelo, amakhasimende ethu ngeke esazikhathaza ngokuthi angayithola kanjani indawo, angagxila ekutheni angathuthukisa kanjani ibhizinisi lawo eliyinhloko. Le phrojekthi, ebizwa nge-xSpancion, izokhuthaza isizukulwane esisha sezicelo ebesingenzeki ngaphambili. ”
Le phrojekthi ihlanganisa ukwakhiwa kwepulatifomu yesathelayithi kanye nenqubo yokukhiqiza, ukukhiqizwa, ukunikezwa amalayisense, nokwethulwa kokudidiyelwa - kusho inkampani - kanye nokwakhiwa kobuchwepheshe obusha bezinkanyezi zesikhathi esizayo, njengokuphehla amandla, izixhumanisi ze-intersatellite, eziphephile neziphephile ukudluliswa kwedatha nokuxhumana kwekhasimende.
Izobona iqembu lihlangana neNyuvesi yaseStrathclyde, iSatellite Applications Catapult, iBright Ascension neD-Orbit UK ukuklama nokwethula iziphuphutheki eziyi-10.
Imali yokwakha umlaza iqhamuka ohlelweni lwe-ESA Pioneer Partnership Projects oluhlose ukuxhasa amabhizinisi ukuthi athathe ubuchwepheshe obusha kanye nezinsizakalo emkhathini.
I-AAC Clyde Space igxile ekuhlinzekeni ngemikhumbi-mkhathi emincane esezingeni eliphakeme, izinsizakalo zemishini, kanye nezixazululo zomkhumbi-mkhathi kuhulumeni, ezentengiselwano, kanye nezinhlangano zemfundo zezicelo ezenzelwe isikhala.
Emuva ngoSepthemba, ama-nanosatellites amane e-Spire, nawo abuye asekelwa yi-UK Space Agency (UKSA), ethulwe ngempumelelo nge rocket yakwaSoyuz izolo.
Ama-nanosatellites akhiwe yiGlasgow ajoyine imikhumbi ku-Earth orbit ephansi eqapha ukuhamba kwemikhumbi, isiza ukubikezela ukunyakaza komhlaba wonke.
Ama-nanosatellites amabili ama-Spire anebhodi ebhodini lokho i-UKSA ekubiza ngokuthi "ikhompiyutha enkulu" ehlose ukuhlinzeka ukubikezela okunembile kakhulu kwezindawo zamakhumbi, ukulandelela ukuthi zikuphi futhi ubale izikhathi zokufika kwazo emachwebeni. Lokhu, kusho, kuzokwenza ukuthi osomabhizinisi bamachweba neziphathimandla bakwazi ukuphatha amadokodo ematasa ngokuphepha.